पत्रकारको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ - Himalkhabar.com
थप समाचारमंगलबार, माघ ९, २०६९
पत्रकारको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ
आफुलाई ‘आर्थिक पत्रकार हुँ रु. ५ लाख नदिए ब्यावसाय नै खतम गरिदीन्छु’ भन्दै काठमाडौ, न्युरोडस्थित वराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिजका सञ्चालकलाई धम्क्याउने विनोद चौलागाई नाम बताउने ठग पक्राउ परेका छन् ।
विनोद चौलागाईं नाम बताउने ती ठगले काठमाडौ, न्युरोडस्थित वराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिजका सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ नदिए ब्यावसाय नै खत्तम गरिदिने धम्की दिएका थिए ।
पहिले आर्थिक दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्ने र अहिले ‘सदाबहार राष्ट्रिय साप्ताहिक’ प्रकाशन गर्न लागेको भन्दै रकम माग गर्ने ठगलाई ब्यापारीले ९ माघमा कोठामा थुनेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् ।
केही दिन अघिदेखि नै ज्वेलरीको कार्यालयमा आएर ‘बराह ज्वेलरीको बारेमा मेरोमा एउटा फाइल आएको छ, रु. ५ लाख नदिए समाचार छापेर पसल नै बन्द गराई दिन्छु,’ भन्न थालेपछि ज्वेलरीका कर्मचारी र सञ्चालकले चौलागाई‌को आवाज र भिडियो समेत गोप्य तरिकाले रेकर्ड गरेका थिए ।
रु. ५ लाखबाट घटाएर साढे २ लाखमा कुरा मिलाएपछि ८ माघमा बेलुकी रकम लिन आउने समय तोकेका ती ठगलाई ९ माघ दिउँसो बोलाएर १ घण्टा कार्यालयमै थुनेर प्रहरीलाईजिम्मा लगाइएको वराह ज्वेलरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमिल स्थापितले बताए । पक्राउपछि चौलागाईले काभ्रेको कात्तिके देउरालीमा घर रहेको र समाचार नछापिदिने शर्तमा रु. ५ लाख माग गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् ।
ती ठगले पत्रकारको नाममा विभिन्न उद्योगी ब्यापारी तथा ब्याङ्कहरुसँग यसरी नै धम्क्याएर रकम असुल्दै आएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । बराह ज्वेलरीले उनीसँग भएको पटक पटकको वार्तालाप र रकम लिन आउँदा गोप्यरुपमा खिचेको भीडियो फुटेज समेत प्रहरी र सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराएकाछन् । वराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक शिव लामिछाने यस्ता ठगहरुबाट धेरै ब्यासायी पीडित बन्दै आएको भए पनि कसैले आँट नगरेको काम आफूले गरेको बताए ।